Uhlu Oluhamba phambili lwe-ICO 2021 | Uhlu oluphezulu lwezexwayiso nezibuyekezo ze-ICO | Insiza Yokufakwa Kuhlu ye-ICO
Joyina i-Bertinity ICO
Ukufakwa Kuhlu Kwe-ICO Ku-inthanethi - Inombolo 1 Yesikhulumi Sohlu se-ICO ngo-2021
Ukufakwa kuhlu kwe-ICO Online kungenye ye- amawebhusayithi amahle kakhulu we-2021 ICO evuselela njalo ngama-ICO amahle kakhulu ongatshala kuwo. Ufuna ukuthumela i-ICO yakho kungxenyekazi yethu chofoza ku THUMELA inkinobho ye-ICO ngezansi:
Ama-ICO amahle kakhulu wokutshala imali ku-2021 - Uhlu oluphezulu lwe-ICO 2021
I-Solidus Technologies yasungulwa ngo-2017 njengenhlangano yezimayini ze-Ethereum futhi manje yethula i-Solidus Ai Tech. I-Solidus iphothula ukwakhiwa kwangaphakathi kwesikhungo sabo sedatha se-Eco Friendly High Performance Computing (HPC) kanye nenkundla ye-Infrastructure-as-a-Service (IaaS) lapho Iziphathimandla zikahulumeni, i-Megacorps, ama-SME & Professionals zizokwazi ukuthenga izinsiza ze-Artificial Intelligence kalula zisebenzisa i- ithokheni yokuqala ye-AI yokusetshenziswa komhlaba (AITECH). November 18, 2021 April 30, 2022 9.9
Abaphathi beRevenue Coin (RVC) baxhasa izinkampani zobuchwepheshe obuphezulu ukukala ukumaketha, ukuthengisa nemisebenzi yezenhlalo. Ama-Startups athola imali abela kuze kufike ku-10% wemali engenayo ekuthengeni okuhlelekile kwe-RVC emakethe, kunciphisa ukunikezwa nokukhula kokulinganisa. October 15, 2021 December 5, 2021 9.8
I-BERTINITY iyindlela entsha ephazamisayo futhi engaziwa ngokuphelele futhi ayikho i-ecosystem yezemvelo ye-KYC yezimali. I-BERTINITY ecosystem iqukethe izingxenye eziyisi-5 eziyinhloko, kufaka phakathi isango lokukhokha le-crypto, ukushintshaniswa okuphakathi, i-ICO launchpad, imakethe yamasheya ezokuphepha emhlabeni wonke kanye nemali yemvelo. October 20, 2021 January 17, 2022 9.2
I-Unigrid izohlinzeka umhlaba ngenethiwekhi yomhlaba wonke neyentando yeningi ngesitoreji nezinsiza ezingasanele. Inethiwekhi ephethwe abantu, yabantu. Ngokubambisana, singaqeda izikhathi zokwehla ezingahleliwe futhi sizenze into yesikhathi esidlule! November 1, 2021 December 31, 2021 9.7
I-Quarashi inika amandla okwabiwa kwabo bonke kuqala kwipulatifomu eyodwa egxile ku: Ingxoxo Yobumfihlo, Ukushintshaniswa Okusetshenzisiwe, IDO Launchpad, iBlockchain Interfaced Multi Crypto wallet. October 1, 2021 December 31, 2021 9.9
I-RastaSwap iphrojekthi eqhutshwa umphakathi. ithuthukiswe ukuthi ibe yi-#1 Crypto Cannabis Ecosystem kanye nebhuloho phakathi kwemakethe yesitoko yendabuko kanye ne-crypto. December 21, 2021 Mashi 1, 2021 9.4
I-NEURONET.Exchange iwukushintshaniswa okuyingqayizivele okunedamu lezimayini kanye nenkonzo yokukhokha. I-NEURONET.Exchange iwukushintshaniswa kobuhlakani bokwenziwa. October 15, 2021 January 31, 2021 9.4
I-Pawā iyithuluzi labanikazi bemishini yezimayini ekuvumela ukuthi wonge ezimayini ze-bitcoin - ngokuzayo izoba yingxenye eyinhloko ye-HashEX kanye ne-BeMine staking protocol. November 8, 2021 January 31, 2022 9.5
I-Veritise inikeza ukuqinisekiswa, ukuhlonza, ukuqoqwa kwedatha kanye nezinsizakalo zokuhlaziya izinkampani nabantu ngabanye. Okumaphakathi kwalokhu kusebenza yi-Veritise Enterprise-grade blockchain yekhono layo lokwenza nokugcina idatha ngokuphepha nangokungaguquki. September 3, 2021 December 31, 2021 9.8
I-Ownex (eyakho) iyithokheni ye-crypto eyakhiwe eyakhiwe ku-Binance blockchain. Abanikazi bethokheni abangu-500 abaphezulu (ababanikazi) bazothola amasheya enzuzo kusuka ku-60% yenzuzo ye-wnex.io, esatshalaliswe ngokwamaphuzu abo. October 17, 2021 April 30, 2022 9
IDhabicoin iqoqo lezimpahla zedijithali zokuhlanganisa amanethiwekhi amaningi kwisistimu eyodwa yedijithali ezovumela abasebenzisi ukuthi baxhumane, bafunde, bakhokhe, futhi benze neminye imisebenzi ehlukahlukene. Inhloso yalo ukukhulisa umnotho we-UAE nokuguqula izimakethe zomhlaba. September 24, 2021 October 25, 2021 9.6
I-Bamonyo iyi-cryptocurrency yephrojekthi eqhubekayo yochungechunge lwamahhotela eyakhiwe izindlu ezincane ezihlakaniphile: Amahhotela Amancane. Ithokheni yezinsiza i-Bamonyo kuzoba ukuphela kwendlela yokufinyelela kuzo zonke izinsiza zamahhotela angu-10,000 esihlela ukuwakha kusukela ngo-2022. November 1, 2021 December 31, 2022 9.6
I-Polygon Earning Platform
Sithuthukisa i-play ukuze sizuze (p2e) imidlalo ye-crypto ku-polygon (matic) network.we sethula ukumaketha kwe-nft kanye ne-staking matic njengoba kuhleliwe. November 24, 2021 December 8, 2021 9.2
Ithokheni KIND yakhelwe ukulingisa ukuthengwa nokuthengiswa kwamadayimane online. Lesi yisibonakaliso esingokomlando! Inhloso yokwakha lolu phawu ukuthi idayimane le-kohinoor aliyona nje ucezu emhlabeni. Eqinisweni, ziningi zazo ngesimo samathokheni emhlabeni. Futhi bonke abantu bangagcina okuningi kwaleli dayimane eliyigugu esikhwameni sabo semali. October 20, 2021 December 5, 2021 9.4
Umhlaba wethu unikwe amandla izigidigidi zamadivayisi ahlakaniphile akhiqiza umsebenzi omangalisayo hhayi ngezinkulungwane noma izigidi kodwa okwenziwayo nsuku zonke. Lesi simo sibizwa ngokuthi i-digilite kusukela ekudaleni indlela yamahhala esuka emhlabeni wangempela iye emhlabeni we-crypto ngokuhlonipha ukungaziwa. November 4, 2021 February 4, 2022 7.5
I-Crypto Stake Token
I-Crypto Stake eco system iyinkundla yokugembula ehlukanisiwe enikeza abadlali emhlabeni wonke ithuba lokubheja kwezemidlalo, ukubhuka imicimbi evela kuwo wonke amagumbi omhlaba. Sikholelwa ukuthi abantu kufanele bakwazi ukubheja besebenzisa imali ye-crypto ngaphandle kwemikhawulo yalokho abangakhetha ukubheja kukho. September 20, 2021 January 31, 2022 9.8
ICoinjoss ihlose ukuhlinzeka abasebenzisi ngolwazi olungenamthungo ekuphatheni ama-cryptocurrensets abo. ICoinjoss iyi-ecosystem yonke eqala ngeplatifomu yayo esheshayo yokushintshanisa, igxile kusixhumi esibonakalayo esisebenziseka kalula sabasebenzisi ukuhweba ama-cryptocurrensets abo ngezinga elihle emakethe. October 15, 2021 November 30, 2021 9.6
I-GHA ecosystem ihlanganisa ukulima okunembayo, ukudwetshwa kwemephu yezindawo zasemapulazini, izinzwa ze-IoT, izinhlelo zokulima eziqondile, ubuhlakani bendawo, isoftware yokuphathwa kwezitshalo, nobunye ubuchwepheshe bezolimo obunobuchwepheshe be- distributed ledger (DLT) kanye nokulima kwe-blockchain kwezolimo. Sinethuba eliyingqayizivele lokuthuthukisa ukusebenza kahle, ukubeka izinto obala, nokwethemba kulo lonke uchungechunge lokuhlinzeka nge-hemp-agriculture. October 26, 2021 December 9, 2021 9.7
IFinancio ingukushintshaniswa okwabelwe phansi okusebenza ku-Binance Smart Chain, enezici eziningi ezizokuvumela ukuthi uzuze umvuzo omkhulu we-crypto. September 15, 2021 October 30, 2021 9.5
Ipulatifomu yezimali esezingeni eliphakathi nendawo (ekhipha isixuku), ekhipha iminikelo yabatshalizimali kuphrojekthi exhaswe ngemali ekukhokheni okuhleliwe kokuqedwa kweMilestone. July 24, 2021 October 31, 2021 9.1
I-Epsilon iyinjini yokusesha eqhutshwa umphakathi, iphephe emphakathini, futhi ivulekile. I-Epsilon inesikhwama sayo esinqunyelwe amandla kanye nokushintshaniswa okwenziwe kabusha. Isebenza kungxenyekazi yeBinance Smart Chain futhi iyithokheni ye-BEP-20. September 4, 2021 December 13, 2021 9.5
Imivuzo yeNexxus inikeza isixazululo esiyingqayizivele sokumaketha sokubambisana komphakathi esiphakamisa wonke umphakathi. Isiza izinhlangano ezisiza umphakathi nezinhlangano ezingenzi nzuzo ukukhokhela izimbangela zazo ezibalulekile zenhlalo ngesikhwama esixhaswayo esihlala njalo esifaka imali kwi-akhawunti yasebhange njalo ngesonto kubathengi abaqhubeka bethenga. January 16, 2020 January 22, 2020 7.8
I-2local izibophezele ekwakhiweni kwamabhizinisi amasha nasekusimeni ngokunakekela imvelo nesimo sezulu, umsebenzi olungile, nokukhula komnotho. Ngalokhu, i-2local ifuna ukufaka isandla kubambiswano olusha lomhlaba jikelele oludingekayo ukufeza izinhloso ze-UN. Ngaphezu kwalokho, isenzo siyadingeka kuwo wonke umuntu! October 17, 2019 December 31, 2019 9.9
I-Encores isizoshintsha umqondo wenkampani wendlela eyodwa yokungenisa imali futhi isabalalise izinzuzo phakathi kwabasebenzisi ngokubanikeza ithuba lokungena kwi-Intanethi noma ukwenza eminye imisebenzi elula, enjengokuxhumana nabantu, ukukhangisa, njll. October 1, 2019 Kwangathi 31, 2019 7.5
Kwethulwa iRobinhood. Ukubeka ukwethemba emuva ekugembuleni. September 14, 2019 February 2, 2020 8.9
I-Flas Exchange iyipulatifomu ebanzi yokuhweba enikeza izinhlobo ezahlukahlukene zamafa edijithali. Njengesikhulumi sokuvikela izimpahla zedijithali esiphephile, esithembekile futhi esithuthukisiwe esenzelwe ukuhweba ngobuchwepheshe, i-Flas Exchange izokwakha uhlu lwezici ezithuthukile ukuhlangabezana nezidingo eziyingqayizivele nezinkimbinkimbi zabachwepheshe nezikhungo. November 8, 2019 February 9, 2020 8.3
I-GRAYLL yi-Distributed Ledger Technology, i-AI ne-Machine Learning efakwe ohlelweni lwezezimali lwe-algorithm oludala inzuzo ebonakalayo ngokuzenzakalela, efinyeleleka ngohlelo lokusebenza olulula olusebenziseka kalula lwe-web ne-web. Sigxile kwimpahla yedijithali nezimakethe zempahla enamathokheni. Izinhlelo zingasetshenziswa kunoma yini, ngokwesibonelo impahla, ubuciko, ingcebo, amamethrikhi wesimo sezulu, idatha yenkambiso yemidiya yezenhlalo nokunye. July 1, 2019 February 17, 2020 9.1
I-HiveNet izohlinzeka ngesisombululo sezobuchwepheshe ukusebenzisa lezi zikhathi zekhompyutha ezingenzi lutho ngokwakha inethiwekhi yekhompyutha esabalalisiwe. Lokhu kuzokwenza abanikazi bamakhompyutha bakwazi ukwenza inzuzo ngezikhathi ezingenzi lutho zamakhompyutha abo September 24, 2019 November 23, 2019 7.9
IMindsync iyipulatifomu nomphakathi womhlaba wonke wabathuthukisi bokufunda ngomshini, ososayensi bedatha kanye nochwepheshe be-AI abafakiwe. Lo mphakathi uzokwazi ukubambisana futhi ubambe iqhaza emincintiswaneni phakathi kwabantu namaqembu ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene. Mashi 1, 2019 April 30, 2021 10.8
I-Pawtocol LLC, inkampani yesikweletu esinqunyelwe i-Delaware ("Pawtocol", "thina", "yethu", "us") ihlose ukuthatha imboni yokunakekelwa kwezilwane eminyakeni yobudala ye-blockchain ngokwakha ipulatifomu enomnotho ogxile ezilwanyaneni nasemvelweni. Leli phepha lichaza umbono wethu nefilosofi yethu ngePawtocol nokuthi kungani sithatha le phrojekthi siyimakete, kanye nenqubekela phambili yethu kuze kube manje nokuthi kungani siyiqembu elifanele ukufeza lokhu. July 1, 2018 December 31, 2018 7.9
ISynchroBit ™ ingenye yamaphrojekthi amakhulu wesigaba sezimali seSynchroSphere® ecosystem, esihlinzeka ngomgogodla wezomnotho kwamanye amaphrojekthi namamojula we-ecosystem. Ipulatifomu lizohlanganiswa ngokuphelele namanye amapulatifomu ezezimali eSynchroSphere® ukwakha isipiliyoni samakhasimende esingenamthungo nokunikeza abasebenzisi indawo yebhizinisi ekhiqiza kakhulu, enembile, evikelekile ngokususelwa kubuchwepheshe be-blockchain kanye ne-cryptocurrensets. August 1, 2019 December 28, 2019 8.2
ITecraCoin ihlela ukuthuthukiswa kweTecra Investment ngokuzayo. I-TecraCoin inelungelo lokushintsha lezi zinhlelo noma iyeke ukuzisebenzisa ngokubona kwayo kuphela. January 17, 2019 January 16, 2020 7.2
Iphrojekthi yeCoinCasso yisixazululo esiphelele nentando yeningi esenzelwe abantu. Umbono wethu uhluke ngokuphelele ngoba sifuna umphakathi ukwazi ukunquma futhi ube nomthelela ekuthuthukisweni kokushintshana kwethu kanye nomkhakha wonke. Kungakho sinikeza abasebenzisi bethu ithuba lokuba ngabanikazi ngokubambisana bephrojekthi yeCoinCasso. October 21, 2018 December 31, 2019 8.2
Iphrojekthi yeKaruschain ihlose ukuthinta okokufaka nokukhipha okuningi kokhiye bezinsimbi eziyigugu ezikhona njengamanje. Ipulatifomu yeKaruschain iyakhiwa ukuze inciphise ngqo izingqinamba nezinselelo ezibhekene nabo bonke ababambe iqhaza ochungechungeni lwezinsimbi eziyigugu. January 14, 2020 February 14, 2020 7.2
I-Level01 yi-World's 1st Peer to Peer (P2P) Derivatives Exchange ne-Artificial Intelligence (AI) Trade Matching Technology and Settlement eBlockchain. I-Level01 ihlanganisa ubuchwepheshe be-blockchain nobuchwepheshe be-cryptocurrency, ukudala ipulatifomu (izinketho) zokushintshanisa nezokuhweba lapho ukuhweba kwezezimali ku-forex, amasheya, izimpahla kanye ne-cryptocurrensets kungenziwa ngokulingana, ngaphandle kwesidingo somthengisi ongumxhumanisi. July 1, 2018 December 31, 2018 9.1
I-SaTT iyisibonakaliso sesevisi esuselwa kubuchwepheshe be-blockchain evumela ukushintshaniswa kokukhangisa nokukhokha kwezithameli. I-SaTT ilawulwa yi-Smart Contract ebala ukunikezwa kokukhangisa ngayo yonke idatha ebanjwe ngokuphepha ku-Ethereum blockchain. Isivumelwano Esinobuhlakani sibeka imibandela yokubamba iqhaza emikhankasweni, silinganise impumelelo, futhi siqinisekise ukuqanjwa kabusha kokugcina. Kwangathi 1, 2018 December 31, 2020 8.3
IGath3r isebenzisa indlela entsha yezimayini ezisesipheqululini ngokwethulwa kohlamvu lwemali lwasendaweni oluxhaphakile kanye nezimayini ezihlanganisiwe. Uhlamvu lwemali lwe-GTH lusebenza kahle ngazo zombili iziphequluli nezinhlelo zokusebenza, futhi alunazinkinga ze-UI, ngaleyo ndlela luvumela izinhlamvu zemali ezintsha nezikhona ukuthi zisebenzise i-hashrate kaGath3r. January 9, 2020 January 11, 2020 6.3
Isixazululo seBethereum sisebenzisa ubuchwepheshe beBlockchain ukuqinisekisa isipiliyoni sokubheja esiphephe futhi esobala kakhulu. Akekho umuntu ophakathi ohilelekile: Abadlali bakha ukubheja, basetha imithetho, futhi banikeze isikweletu ukuze bafeze izinkokhelo. Izinkontileka ezihlakaniphile zivikela izimali futhi zisabalalisa ama-winnizing ngokuya ngezimo zokubheja nemiphumela. October 1, 2018 December 31, 2018 8.4
I-IBNIF CINEMADROM - Le yi-International Blockchain Network of Independent Cinematographers, eyakhelwe kwimigomo emisha yezobuchwepheshe, neyezezimali yokusebenzisana phakathi kwabo bonke ababambiqhaza abakhiqiza amafilimu, ababhali, abakhiqizi, ongoti, abatshalizimali kanye nababukeli. Kumongo wayo, i-IBNIF CINEMADROM isebenzisa ubuchwepheshe be-blockchain February 3, 2020 April 30, 2020 6.9
IMyTVchain iyiplatifomu yokuqala ye-web TV enikezelwe kumaqembu ezemidlalo nakubadlali, futhi manje imemezela ukuvulwa kwesiteshi se-TV se-Sport En France, ithelevishini i-The Sports Movement. Lesi siteshi sethulwe yisinyathelo seFrench National Olympic and Sports Committee (CNOSF), futhi sizinikele ekukhuthazeni yonke imikhakha, yonke imifelandawonye kanye namaqembu abo. February 29, 2020 Mashi 27, 2020 6.1
IBILLCRYPT pl wuhlelo lokuhlanganiswa olunabelwe umhlaba wonke kumahhovisi eBlockchain-Representative office (BR). Ingqalasizinda eyodwa ehlanganisa amahhovisi abamele iBlockchain ngendlela yezicelo ezisatshalaliswa kwi-blockchain (DApp). Ipulatifomu ehlukile ehlanganisa zonke izinzuzo zomhlaba wangempela nendawo ebonakalayo, i-Intanethi ejwayelekile ne-blockchain. July 3, 2019 April 23, 2020 7.4
Ufuna Ukufaka Uhlu Lwe-ICO Yakho Futhi?
Faka kuhlu i-ICO yakho namuhla kuwebhusayithi yethu futhi sifinyelele izinkulungwane zabatshalizimali abavela kuwo wonke umhlaba. Hlola ukufakwa kuhlu kwethu namaphakheji okukhangisa ngokuchofoza okuthi FAKA I-ICO inkinobho.
Luthini Uhlu lwe-ICO ku-inthanethi?
Ukufakwa kuhlu okuku-inthanethi kwe-ICO kungumphakathi omkhulu lapho abantu befika bezoklelisa ama-ICO abo Kusukela ngo-2018, sibuyekeza imininingwane ngama-ICO akamuva aphezulu atholakala emakethe. Kunamawebhusayithi amaningi wokufakwa ohlwini we-ICO atholakala kwi-inthanethi kepha akuwona wonke aphephile futhi athembekile ukutshala imali njengoba iningi lawo lingahlaziywa njalo.
Labo abatshalizimali abanentshisekelo yokutshala imali kuma-ICO. Bangabheka izilinganiso ze-ICO kuwebhusayithi yethu bese betshala imali njengoba kuzobasiza ukuthi bafune okungcono kakhulu Okusebenzayo, Ngaphambili & I-ICO ezayo.
I-ICO, noma i-Initial Coin Offering, kwesinye isikhathi ibizwa nangokuthi "ukuthengiswa kwamathokheni" noma "ukunikezwa kwamathokheni okuqala", kuwumkhuba wokubuyiselwa kwemali kumaphrojekthi we-blockchain, lapho i-cryptocurrency noma ithokheni inikezwa abatshalizimali bokuqala, ngaphambi kokufakwa ohlwini emakethe ebanzi , njengokushintshana.
Kuyalulekwa ukuthi kwenziwe ucwaningo olunzulu ngalowo msebenzi ngaphambi kokutshala imali. Lokhu kufaka ukufunda iphepha elimhlophe, ukubheka ukuthi ngabe i-ICO inikela ngenani lomhlaba wangempela futhi icwaninga iqembu ngokuningiliziwe.
Nakhu ukuthi ungabamba iqhaza kanjani ku-ICO:
Ungumnikazi we-cryptocurrency efanele i-ICO eyamukelayo njengokutshalwa kwezimali.
Qiniseka ukuthi i-cryptocurrency wallet iyahambisana nethokheni ye-ICO.
Kathathu hlola ikheli lediphozi emithonjeni esemthethweni.
Yini i-ICO Soft Cap?
I-ICO ifinyelele enhlosweni yayo uma kufinyelelwe isicoco sayo esithambile. Ikhephu elithambile inani elincane elidingekayo ukuze iphrojekthi iqhubekele phambili.
Yini i-ICO Hard Cap?
Iningi lama-ICO lizoba nekhanda eliqinile, okuyisamba esiphezulu abazosamukela kutshalo-mali. Uma i-ICO yehluleka ukufinyelela ikepisi layo elithambile, ama-ICO amaningi azobuyisa izimali kubatshalizimali.
Yini amathokheni we-ICO?
Amathokheni angachazwa njengezimpahla ze-crypto ezinikezwe inkampani exhasa iphrojekthi ngama-ICO, okungaba ithuluzi lokukhokha (iyunithi yemali) kuphela ku-ecosystem yephrojekthi enikeza izici ezifanayo njengezinhlamvu zemali, kepha umnikazi wazo unamanye amalungelo kwinethiwekhi , njengelungelo lokuvota, ilungelo lesabelo, ilungelo lokuthola ingxenye yemali engenayo, nokunye. Amathokheni adalwa njengezinkontileka "ezihlakaniphile" ngokususelwa kunethiwekhi ye-Ethereum noma ye-Wave blockchain. Amathokheni angabonwa njengezinsimbi zezezimali noma impahla (noma izinsizakalo) ezingasetshenziswa ngumnikazi wamathokheni (izinsiza), ngokuya ngezimpawu ze-cryptocurrency.
Yini i-ICO Whitepaper?
I-ICO Whitepaper yidokhumende ekhishwe yinhlangano / inkampani ekhipha amathokheni ngenhloso yokuthola imali yokuxhasa iphrojekthi ethile. Akukho okuqukethwe nezimo ezichazwe ngokomthetho okumele kuhlangatshezwane nephepha elilodwa elimhlophe. Umbhalo uvame ukuqukethe imininingwane ngenqubo yokukhishwa kwamathokheni, imininingwane ephathelene nomsebenzi ozosetshenziswa, kanye neqembu elisekela iphrojekthi.
Kusebenza Kanjani Ukunikezwa Kwezezimali Zokuqala?
I-ICO iqala ngohlobo oluthile lwesitatimende, esivame ukubizwa ngephepha elimhlophe elichaza imininingwane yephrojekthi, uhlelo lwephrojekthi, iBhajethi nezinhloso nezingxoxo ezithile mayelana nokuthi izinhlamvu zemali noma amathokheni azokwabiwa kanjani. (Imvamisa amathokheni akhishwa ukumela ubunikazi bephrojekthi noma inhlangano ezimele yokuzimela, kepha izinhlamvu zemali imvamisa ziyimpahla yezimali.)
Ama-ICO amaningi anquma inani lamathokheni noma izinhlamvu zemali ezinikezwa ngaphambi kokuthengiswa. Abatshalizimali abathenga phambilini banganikezwa amagama akhethwayo ngokukhokha intengo ephansi ngohlamvu lwemali ngalunye. Kepha amanani angashintsha, futhi uma abantu abaningi bethenga, ungagcina unamathokheni ambalwa.
Amanye ama-ICO anenhloso ethile yokuqongelela imali futhi angagcina intengo imisiwe kukho konke ukuthengisa kwawo. Abanye bagcina ukunikezwa kulungisiwe futhi balungisa intengo ngokuya ngesidingo, kukhula ngangokunokwenzeka futhi kukhona nalabo abahlinzeka ngokulethwa okunamandla lapho kudalwa uhlamvu lwemali olusha lapho umuntu elithenga.
Ama-ICO amaningi akhishwa ngokuzimela, aphethwe ngumzimba okhipha iwebhusayithi noma ipulatifomu yawo. Lokhu kwenzeke ngoba okunikezwayo okuthembekile ngokwengeziwe kuvame ukwenziwa lula insizakalo yokushintshisana noma yokuthengiselana engavumela abatshalizimali izindlela ezithile zokuphepha ezibhekene nabakhwabanisi.
Umehluko omkhulu phakathi kwe-ICO ne-IPO
Ukunikezwa komphakathi kokuqala (i-IPO) inqubo efana ne-ICO lapho umtshali-zimali ethola amasheya kubunikazi benkampani. Lokhu kuphambene ne-ICO, lapho amathokheni wezohwebo athengwe ngabezimali angangeza inani uma ibhizinisi lisebenza kahle.
Kuma-ICO, abatshalizimali bathenga ama-cryptocurrensets amasha ngenhloso yokwenza inzuzo lapho inani lenyuka. Lokhu kufana nomuntu othola inzuzo lapho isitoko abasithengayo kusitoko senyuka. I-ICO yehlukile ekuthengeni amasheya emakethe yamasheya ngoba lapho utshala imali kumathokheni amasha, awukwazi ukwabelana ngobunikazi benkampani.
Kungani ukubuyiselwa kwemali kwe-ICO kudumile?
I-ICO inguqulo yedijithali ye-crypto yokubuyisa imali. Isetshenziswe ngempumelelo ukuxhasa ama-cryptocurrensets, kulezi zinsuku aphumelela ngokwedlulele futhi aqoqe inani elikhulu lezezimali ebelingeke likwazi ukukwenza ngokubuyiselwa kwemali okujwayelekile. Nazi ezinye zezibonelo zamaphrojekthi we-ICO aphumelela ekubuyiseni imali: I-Stratis, i-Ethereum, i-Iota, i-Viberate ne-Edgeless
Ungayisebenzisa kanjani i-ICO?
Izinkampani ze-Crypto-currency ezifisa ukuqoqa imali nge-ICO zidinga ukuhlinzeka ngolwazi oluthile, kufaka phakathi incazelo yephrojekthi, inhloso yephrojekthi, izidingo zotshalo-mali, ingxenye yamathokheni inkampani ezoyigcina, isikhathi iphrojekthi ye-ICO nohlobo lwemali ebonakalayo yamukelwa yiphrojekthi.
Kukufanele yini ukubamba iqhaza kwi-ICO?
Into esemqoka ukuqonda ukuthi utshala imali embonweni womunye umuntu, okungenzeka ukuthi awukufanele. Ngakolunye uhlangothi, isigaba se-cryptocurrency siyanda manje. Le yinkambu ethembisayo yokuthola imali enkulu, futhi uma ungafuni ukuphuthelwa yithuba uqhubeke namuhla.
Ukutshala imali ku-ICO
Ukutshalwa kwezimali kwe-ICO kunezinzuzo zombili ezibalulekile nezinkinga uma kuqhathaniswa nokutshalwa kwezimali sekuvele kubhalwe nge-cryptocurrency. Ngakho-ke, abatshalizimali abanekhono, abathenga i-cryptocurrency entsha ku-ICO ngokushesha okukhulu, bangathemba ukwanda kwenani elikhuphukayo. Isibonelo, labo ababeke imali ku-Ethereum ICO ngonyaka we-2014 benze inzuzo enkulu. Kungakapheli izinsuku ezingama-42, kutshalwe izigidi ezingama-18 zamadola aseMelika. I-Ether yathengiswa e-ICO ngamasenti angama-30. Ngisho nokufakwa kuhlu kokuqala kokushintshaniswa kwesitoko, abatshalizimali bajabule ngokukhuphuka kwenani elingamakhulu ambalwa wamaphesenti. Namuhla i-cryptocurrency Ether ka-Ethereum iyi-Coin yesithathu enamandla kunazo zonke emakethe futhi okwamanje ithengiswa cishe ngama- $ 100.
Izinzuzo ze-ICO Investment
Ama-ICO athembisa amathuba aphezulu kakhulu wokuwina
Noma ngubani ocwaninga ama-ICO uzofunda ngamakhono amaningi wokusebenzisa wobuchwepheshe beBlockchain
Abatshalizimali bathonya ukwakheka kwe-crypto-business landscape
Ukubamba iqhaza kuma-ICO kuqonde ngqo
Okubi kokutshalwa kwezimali kwe-ICO
Amacala amaningi okukhwabanisa enza ukubamba iqhaza kuma-ICO kube yingozi kakhulu
I-Wallet iphoqelekile ukuthi ibambe iqhaza
Ucwaningo lwangaphambilini lunconywa kakhulu, ludinga isikhathi esiningi
Emakethe yamabhere eqhubekayo, kunzima kakhulu kuma-Startups ukuzisungula
Nakhu ongatshala imali ku-ICO:
Ukutshala imali ku-ICO, kufanele upheqa kuwebhusayithi yethu ukuthola amaphrojekthi angahle athembise adinga imali. Lapho usuthole uhlu lwamaphrojekthi lapho ungabona khona utshalomali lwakho, udinga ukuya kuwebhusayithi yabo ukuyothenga amathokheni alo.
Ukuthengwa kwemali yedijithali
Njengoba kunikezwe ukuthi i-ICO ibanjelwe kuma-cryptocurrensets, hhayi kwizimali ze-Fiat, kuyadingeka ukushintshanisa imali nge-cryptocurrency (ikakhulukazi i-Etherium).
Dlulisela i-cryptocurrency kuphrojekthi bese uthola isiqinisekiso sokubamba iqhaza
Ukuthola izinhlamvu zemali zeprojekthi esikhwameni se-crypto
Ukuhoxiswa kwemali ekushintsheni kwe-crypto
Lapho amanani afanele umtshalizimali efinyelelwa, ukuthengiswa nokulungiswa komphumela wezezimali kuyenziwa
Izigaba Zokuthengisa ze-ICO
Izigaba zokuthengisa ze-ICO zifaka inqubo ebheka udaba lokuqongelela imali nokuthi izimpahla zedijithali zikhishwa nini emakethe njengama-blockchains afana namasheya aziwa kakhulu njengamathokheni anikezwa ngentengo enesaphulelo engashintshaniswa ngohlu lwe-ico cryptocurrency ngabatshalizimali bokuqala ngesikhathi sesigaba sokuqala sephrojekthi ethile. Sinikezela nge- uhlu oluphezulu lwe-ico. Nazi izigaba ezintathu zokuthengiswa kwe-ICO:
Isigaba I UKUDAYISWA KWANGasese
Phase II U-PRESALE
Isigaba III UKUDAYISWA KWESIXUKU
Kodwa-ke, ayikho iqoqo lemithetho eyakhiwe enquma ukwakheka kokukhula okushisayo kwe-crypto ico. Ekuqaleni, ngesikhathi seSigaba I, ukuthengiswa kwangaphambi kokuthengiswayo nokwangasese kuyamenyezelwa kuphela lapho iSigaba II siqala ukushintshanisa ukufakwa kuhlu okuyisisekelo bese kuza iSigaba III lapho amathokheni akulungele ukuthengwa ngumphakathi ngokwenza imali eningi.
Uhlu Oluhamba phambili lwe-ICO:
Sine uhlu oluzayo lwe-ICO ezosebenza maduzane. Sinesigaba esihlukile sokukhombisa ama-ICO akamuva azayo.
Uhlu lwe-ICO olusebenzayo:
Ukuthola uhlu oluhle kakhulu lwama-ICO asebenzayo, awudingi ukudlula kumawebhusayithi ahlukahlukene manje. Sinikeza uhlu oluvuselelwa njalo.
Ama-pre-ICO ashibhile futhi ayindlela enhle yokuthola inzuzo esheshayo. Kulezi zinsuku, Ziyaziwa phakathi kwabatshalizimali ngokuhola okuningi. Ngakho-ke, bheka okwethu Uhlu lwe-Pre-ICO namuhla.
Faka ohlwini i-ICO yakho namuhla kuwebhusayithi yethu futhi ufinyelele izinkulungwane zabatshalizimali abavela kuwo wonke umhlaba futhi, manje sesihlinzeka ngesevisi ye-KYC eshesha kakhulu ye-ICO. Gcwalisa ifomu lethu lokuxhumana namuhla futhi sizokuthinta emahoreni angama-24 alandelayo.
Uhlu Lwamathokheni I-imeyili:
Copyright © 2021 Ukufakwa Kuhlu Kwe-ICO Ku-inthanethi. Wonke Amalungelo Agodliwe.